Ever-Power Servo Motors - အနုတ်၊ တီကောင်လျှော့ချသူများ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုဟ်ဂီယာအုံများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောစက်များ၊ helical gear၊ sprial bevel ဂီယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ၊ လယ်ထွန်စက်ဂီယာများ၊ ထရပ်ကားဂီယာများ၊ တီကောင်ဂီယာအုံ
အစဉ်အမြဲ - ပါဝါ Servo Motors က
ပင်မစာမျက်နှာ / စက် / Ever-Power Servo Motors
ကောင်းသော linear နှင့် torque အတွက်သေးငယ်တဲ့အတက်အကျ
မြင့်မားသောသံလိုက်စွမ်းအင်၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ ပေါ့ပါးသည်
SN Volt ။
MAX CURR ။
7 380 18.5 42 63 170? 40? 55 ၇? ၂၀ 7
8 380 22 50 75 297? 40? 55 ၇? ၂၀ 7
9 380 37 75 112 340? 20? 55 ၇? ၂၀ 10